युगसम्बाद साप्ताहिक - विपतलाई पीडापछिको परिवर्तन गर्ने अवसर पनि भनिन्छ
Wednesday, 10.23.2019, 11:15pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 05.27.2015, 11:38am (GMT+5.5)
डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल, उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
० विनाशकारी भूकम्पपछि अब नेपालको अवस्था कस्तो होला ?
प्राकृतिक विपतका कारण हामीले थुप्रै नेपाली गुमाएका छौँ । खबौैंको क्षति व्यहोरेका छौँ । यो पीडाको घाउ ओभाइसकेको छैन । विपतलाई ‘चान्स टु चेन्ज’ अर्थात् पीडापछिको परिवर्तन गर्ने अवसर पनि भनिन्छ । यसलाई पीडाबाट प्राप्त पुनर्जागरण पनि भनिन्छ । जापानिजहरू विपतलाई राम्रो गर्ने अवसरका रुपमा लिन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् अघि राम्रो नगरेकामा अब अझ राम्रो बनाउँ । त्यसैले सबै एकजुट भएर नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ ।
० क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो नि हैन, विज्ञहरूले त धेरै पहिलेदेखि चेतावनी दिइरहेका थिए ?
यो प्राकृतिक प्रक्रियाले आएको विपत हो । यसमा कसैको दोष छ भने, हाम्रै छ । कि हाम्रा संरचनाका कारण हामीले बढी क्षति व्यहोर्नुपर्याे । यो पीडाका बेला हामी नेपालीमा जसरी भावनात्मक एकता जाग्यो, त्यो हाम्रो पुँजी हो, उज्यालो भविष्य हो र आशाको किरण हो । पहाडमा भुइँचालो जाँदा तराईले चामल पठायो, पहिले कोसीमा बाढी आउँदा पहाडले कपडा पठाएको थियो । यो नै देशको भाइचारा हो । अहिले स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्छाैं भनेर युवा पुस्ताको हुल आइरहेको छ । मलाई काम गर्ने प्लेटफर्म चाहियो, पैसा चाहिँदैन भनेर युवाहरू आइरहेका छन्, यो भावना नै हाम्रो गर्व हो, हाम्रो सम्पत्ति हो । अहिले विभिन्न संस्थाले युवा परिचालन गरे, कतै युवाहरू स्वेच्छाले परिचालित भए ।
० अबको सम्भावना के देख्नुभएको छ ?
सहरको डिजाइन, ग्रामीण बस्तीको डिजाइन, घर यसरी बनाउनुपर्छ, पूर्वाधार यसरी बनाउनुपर्छ भनेर युवा पुस्ता स्वस्फूर्त रुपमा आएको छ । कतिपय युवा गाउँगाउँमा गएर अस्थायी बास निर्माणमा लागिसकेका छन् । यो हाम्रो ठूलो पुँजी हो । यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यही पुँजीले देश बनाउन सक्छौँ भन्ने आशा जागेको छ ।
० भूकम्पले नयाँ अवसर पनि दिएको भन्नुभयो । त्यो कसरी ?
अब यो विपतलाई अवसरका रुपमा हामीले लिनैपर्छ । यति धेरै युवाशक्ति छ, भाइचारा छ, हाम्रो अगाडिको बाटो उज्यालो छ । यो अकस्मातको भुइँचालो होइन । फेरि पनि यसले हामीलाई थप पाठ सिकाएको छ । पहिलो, अब हामी प्राकृतिक विपतबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न लागिहाल्नुपर्छ । नत्र हाम्रो भविष्य सुरक्षित छैन । दोस्रो, राज्यलाई बलियो बनाउनैपर्छ भन्ने कुरालाई यो विपतले थप सम्झाएको छ । यद्यपि राज्य बलियो हुनुपर्छ भनेर भनिराख्ने कुरा होइन । प्रत्येक जनताका पीरमर्का, दुःखलाई हेर्ने राज्यले नै हो । राज्य पनि उदार हुनुपर्छ । नयाँ विचार र प्रविधिको ज्ञान भएका युवालाई राज्यले समेट्नुपर्छ । यस्ता युवाले राज्यमा अवसर पाउनुपर्छ ।
अर्काे, यस विपतले हामी सबै नेपाली एक हौँ भनेर पनि बताएको छ । धर्ती काँप्दाखेरि महल र झुपडीमा बस्ने दुवैको मुटु काँपेको छ । विभिन्न कारणले आर्थिक हैसियत तलमाथि भए पनि आखिर जमिन थर्कंदा सबैको मुटु थर्कंदो रैछ । त्यसकारण हामी सबै एकै रहेछौँ भन्ने पनि यो विपतले हामीलाई सम्झाएको छ ।
यो सबै पाठको निष्कर्ष हो, अब हामीले भावी पुस्तालाई केही दिनैपर्छ । हामीले भावी पुस्तालाई दिने भनेको सुरक्षित नेपाल, सबैको नेपाल नै हो । यो विपतले तिमीहरू आत्मनिर्भर बन भनेको छ । हामीसँग पाल छैन, खाद्यान्न छैन, औषधि छैन, उद्धार गर्ने हेलिकोप्टर छैन । अब हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ ।
यो विपतले यो आशाको किरण देखाएको छ कि वल्लो गाउँमा पहिरो जाँदा पल्लो गाउँका मान्छे सहयोग गर्न आउँछन् नै । यसरी एक नेपालीको अर्काे नेपालीप्रतिको सद्भाव, सहयोग, स्वयंसेवा देखेर हामी धेरैले महसुस गर्दैछौँ कि म एक्लो छैन । यो विपतपछि खासगरी युवाहरू जागेको पाइएकाले हामी अब नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छौँ । यो क्षतिपछिको विकासलाई पुनर्निर्माणभन्दा पनि नवनिर्माण भन्न उचित होला ।
० नेपालले अब चाल्नुपर्ने कदम के के हुन् जस्तो लाग्छ ?
अब हामीले आफ्नै उत्पादन, आफ्नै अर्थतन्त्र, आफ्नै विवेकले बलिया संरचना र बस्तीहरू बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हामी अव्यवस्थित थियौँ, अरुको नक्कल गरिरहेका थियौँ । हाम्रो देश भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र हो । यो जान्दाजान्दै पनि सहरमा हामीले विदेशको नक्कल गरेर अग्ला भवन बनाउन लाग्याँै । यहाँनेर, यो विपतले शासन–प्रशासनमा बस्नेले प्राविधिक, विज्ञ, विशेषज्ञको कुरा पनि सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ । विशेषज्ञले मापदण्ड बनाए तर सरकारी संयन्त्रले त्यसको अनुगमन गरेन, त्यसको ख्यालठट्टा गरे । आज आफैँले बनाएका स्कुलहरू भत्किए, आफैँले बनाएका भवनहरू भत्किए । त्यसकारण नीति–नियम नमान्दा आफैँलाई घाटा रहेछ भनेर सरकारी संयन्त्रमा बस्नेहरूलाई पनि अहिले चेत आएको हुनुपर्छ ।
भविष्यका लागि यो विपतले हामीलाई अनुशासित बनाएको छ, जवाफदेही बनाएको छ । कि म मेरो पेसाप्रति, पदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
० पुनःनिर्माण गर्दा अहिलेकै जस्तो भद्रगोले त हुँदैन होला नि ?
भूकम्पपछि तुरुन्तै नीति–नियमका कुरा आए । भवन निर्माण, सडक निर्माणमा यस्तो नीति हुनुपर्छ, कडा नीति हुनुपर्छ, यस्ता कारबाही हुनुपर्छ भन्ने खालका कुरा आए । पहिले नीति, मापदण्ड बनाउँदा सरकारको विरोध गर्ने हाम्रो समाजले विपतपछि सरकारलाई त्यही नीति बनाउ भन्न थालेको छ । सरकारलाई नीति–मापदण्ड बनाउन त जनताबाट अवरोध नहुँदो रैछ । यसकारण पनि अब हामी व्यवस्थित किसिमले अघि बढ्छौँ ।
भूकम्पको सानो धक्कामै के–कसो भयो भनेर कार्यालय गएका श्रीमान् वा श्रीमतीलाई फोन गरेर सोध्नुपर्ने भयो । बुद्धिमानीले अरुको भोगाइबाट सिक्छ, हामीले आफ्नै भोगाइबाट सिक्नुपर्ने भएको छ । यो भोगाइले देश बनाउनुपर्छ, समाज बनाउनुपर्छ, नीति–नियम बनाउनुपर्छ, हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, भन्ने कुरा सिकाएको छ ।
० अब कसरी अघि बढ्ने त ?
योजना आयोग सरकारको सल्लाहकार मात्र हो । हामीले योजना बनाउने हो, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने हाम्रो योजना असफल हुने हो ।
० त्यही त अब कस्ता योजना बनाउनुहुन्छ त तपाईंहरू ?
योजना बनाउने सन्दर्भमा अब हाम्रा सोचाइ परिवर्तन हुन्छन् । योजनाका प्राथमिकतामा पनि केही फेरबदल हुन्छ । भलै अहिले देशभरिका २०–२५ प्रतिशत जनता यो विपतबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । ७५ देखि ८० प्रतिशत जनता अहिले प्रत्यक्ष प्रभावित छैनन् । विपतबाट प्रभावित नभएका जनताको पनि विकासको चाहना छ । भूकम्प प्रभावितको जनजीवन सामान्य अवस्थामा ल्याउनु छ । अन्यत्र क्षेत्रमा पनि विकास गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण अहिलेका प्राथमिकता जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्ने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने नै हो ।
० राष्ट्रिय योजना आयोगको अबको प्राथमिकता पहिलेकै जस्तो हुन्छ कि बदलिन्छ ?
पहिले हाम्रा योजना गरिबी निवारणमा केन्द्रित थिए । अब हामी पुनर्निर्माण र लगानीमा केन्द्रित हुन्छौँ । अबको हाम्रो उद्देश्य यो विपतको व्यवस्थापन नै रहन्छ । अब हामी भूकम्पप्रति सजग हुनेछौँ ।
अब हाम्रो योजना भुइँचालोले भत्केका घरहरूको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । अबको निर्माण भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनेछ । त्यहाँ मापदण्ड सहितको घर बनाउन, एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारलाई हाम्रो सुझाव रहन्छ ।
हामीले सुरक्षित र सम्भव भएका स्थानमा एकीकृत बस्तीको योजना ल्याउँछौँ । मापदण्ड सहितका घर बनाउँदा पनि हाम्रो मौलिकतामा नयाँ प्रविधि जोड्नेछौँ । सरकारले दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनेको छ । यसबाट ग्रामीण भेगमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक सामान्य घर बनाउन सकिन्छ । यसो हँुदा गरिबलाई पनि राहत हुने भो । योसँगै अहिले भुइँचालोको प्रभावमा नपरेका तर भविष्यमा खतरा रहेका ग्रामीण खासगरी गरिब बस्तीका लागि पनि हामीले योजना ल्याउँछौँ । ग्रामीण भेगमा स्थानीय साम्रगी बाँस, गोबरको प्रयोगबाट घरलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । ग्रामीण बस्तीका घरलाई पनि नयाँ ढंगले संरक्षण गर्न सकिन्छ । जसलाई अंग्रेजीमा रेट्रोफिट भनिन्छ । यो रेट्रोफिटको योजना ल्याउने हाम्रो तयारी छ । विपत पर्दाका लागि आवश्यक संयन्त्र, सामग्री, संरचना निर्माणमा पनि हामी लाग्छौँ ।
० तत्कालका लागि के के काम भए ?
अहिले हामी राहत र उद्धारकै चरणमा छौँ । त्यसपछि जनजीवन हामीले सुरुवातमा गरेको काम सामान्यीकरणको चरण हो । यो अल्पकालीन योजना भयो । अनि, दीर्घकालीन योजना पुनर्निर्माण र नवनिर्माण चरणमा हामी लाग्छौँ । अहिले विपतबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन अर्थात् पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट्स (पीडीएनए) को काम भइरहेको छ । यसमा योजना आयोगको नेतृत्व, मन्त्रालयहरूको समन्वय, सम्पूर्ण दातृनिकायको संलग्नता छ । यो काम एक महिनामा सकिएला । अहिले हामीले जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने तत्कालीन योजना हामीले सरकारलाई दिइसक्यौँ । त्यसपछि हामी दीर्घकालीन योजनामा लाग्छौँ ।
(रातोपार्टी डट कमबाट)